Erik Johansson hampisavoritaka ny sainao amin'ny 'The arkitek' | Famoronana an-tserasera
Misafotofoto ny saina ao amin'ny 'The Architect' an'i Erik Johansson
Tamin'ny fahavaratra lasa teo dia nanana ny fotoana hihaonana in situ ny fomba fiasan'ny mpanakanto tena mahay ny fanodinkodinana sary toa an'i Erik Johansson. Tao anatinà andian-dahatsary iray dia nasehony anay ny fizotrany mamorona sy ny fomba fisehon'ny hevitra hamaritana ny tsirairay amin'ireo sanganasa izay ahagagaany antsika matetika.
Toy ny 'The Architect' na 'The arkitek' izay tena tanjony afangaro ny sainay mba hiezahanao mitady ny vahaolana tonga lafatra mba haka sary an-tsaina izay "hitanao". Asa izay mety hanjary ho mahasosotra rehefa manandrana manafatra ara-tsaina ny singa tsirairay avy izahay izay manolotra ny atin'ny trano amin'ny voalohany, mba hitovy endrika amin'ny ety ivelany.
Rob gonsalves dia mpanakanto iray hafa amin'ilay sary izay miaraka amin'ny sary hosodoko mitondra antsika amin'ny fomba famitahana ny saina hanehoana izany inona indray mandeha toa zavatra, mankany amin'ny iray hafa izy io ary saika tsy mipi-maso akory.
Afaka manao izany koa isika tsarovy Roy Lichtenstein miaraka amin'ny tranony izay mitady ny vokany mitovy amin'i Johannson hanova tanteraka ny prisma ny zavatra hita amin'ny effets optique. Ny video eto ambany dia mitondra anao eo alohany.
Raha mandeha lavitra kokoa amin'ny lasa isika MC Escher dia mpanao majia ny effets optique miaraka amin'io maritrano io izay mitarika fikorontanana ary milalao amin'ny sain'ny mpijery amin'ny fomba mahavariana.
Mpanakanto marobe izay mitondra antsika mivantana amin'ity sanganasa vaovao nosoratan'i Erik Johannson miaraka amin'i izany toe-javatra milamina isan'andro izany izay ahitanay ny mpamorona sy ny alikany, tena mampalahelo tokoa ao anatin'io trano io izay toa milamina tokoa ny maneho ny refy hafa ary ny vokany optika hafa amin'ny asa-tanana sy ny famaranana.
Ho anao izay mahalala ho an'ity artista ity aloha vez manana ny tranonkalanao ianao hahalala ny asany rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Misafotofoto ny saina ao amin'ny 'The Architect' an'i Erik Johansson
Sary Krismasy tonga lafatra